» “द’लित भएकै कारण श्रीमती,लाई माइतीले छु’टायो ,आमा नहूदाँ दु’धे छोरिको भयो बि’चल्ली( भिडियो) “द’लित भएकै कारण श्रीमती,लाई माइतीले छु’टायो ,आमा नहूदाँ दु’धे छोरिको भयो बि’चल्ली( भिडियो) – हाम्रो खबर
“द’लित भएकै कारण श्रीमती,लाई माइतीले छु’टायो ,आमा नहूदाँ दु’धे छोरिको भयो बि’चल्ली( भिडियो)
2021, July 11th, Sunday
हाम्रो खबर संबाद दाता 364 Views
“मोरंगको बिराटचोक बाट एक युबक काखमा सानी छोरि च्या’पेर मिडियामा आएका छन् । सानो जात भएकै कारण ससुरालीले छोरिलाई फ’रार गरेको भन्दै मिडियामा आफ्ना, कुरा सुनाएका छन्। चौधरी युवतीले द’माई युबकसंग बिबाह गरेपछि उनीहरुको एक सानो बच्चा पनि जन्मेको छ। मोरंगका रोमन दर्जी आफ्नी श्रीमती मनिषा चौधरी को खोजिको लागि मिडिया मा आई श्रीमतीको फोटो सा’र्बजनिक गर्दै खोज्दै आएका हुन्।”
प्रेम बिबाह गरेका ,यस जोडीले बिबाहको बेला नै माइतीपरिवारले छु’टाउन खोजेका थिए। त्यति खेर छुटिन नमानेर बिबाह गरेका यस जोडीलाई समयसमय मा परिवारले छुटाउन प्रयास! गरेका थिए। १०७६ साल मा हाम्रो बिबाह भएको अहिले २ महिना भयो श्रीमती ह’राएको। माइती गएकी श्रीमती घर आएपछि एकोहोरो ,टोलाउने ,हेरिरहने ,बोलाउदा झ’र्किने गर्न थालिन।
“ए’कोहोरो मोबाइल,चलाइरहने ,सुतिरहने गर्न थालिन। मैले धेरै सोधे के भयो ,किन यस्तो गरेको भने तर उसले केहि भनिन त्यसको २/३ दिनमा उ ब्ये’पत्ता भइ । श्रीमतीको धेरै ठाउमा खोजि गर्दा केहि पत्ता नलागेपछि एकजना बहिनीले आफ्नी आमाले लादै गरेको र गाडी पनि चलाएको देखेकी रहेछिन। हामीलाई जात नमिलेकै कारणले गर्दा छुटाउन खोजेका थिए त्यहि भएर होला लागेको।”
“आमाले लगेको कुरा थाहा पाएपछि म ससुराली गैर सोध्दा आफुलाई केहि थाहा नभएको कुरा बताए। प्रेम बिबाह गरेको हामीले तर आज यसरि छुटिन पर्यो दु’धे बच्चा काखमा छ,रातदिन रो’हिरहन्छ मैले उसलाई कहाँ बाट आमा खोजेर दिउ। मलाई ससुरालीले अहिले सम्म स्वी’कार गरेका छैनन् र मैले त्यो घर अहिले सम्म टे’केको थिएन , पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।”
“गौतम’बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’लाई ‘आर्थिक संकट’, निर्माणको काम रोकियो”
“पुण्य गौतम”ले शुरु गरे प्र’हरी, हि’रासतमै अनशन”
“भीम रावलको प्रस्तावः दुईतीन, वर्ष कुनै,पनि वैदेशिक”सहयोग,नलिऔं”
“माधव नेपाल,लाई आइलाग्यो, अर्को फसाद”
“मन्त्रिपरिषद् विस्तार, बिस्तारै नहँदै, ढल्न सक्छ देउबा सरकार , बाहिरियो रहस्य “
“विष्णु माझी,लाई खोज्न प्रहरी, परिचालन”
“एमसिसी, छिटो पास, गरौँ : डा. भट्टराई”
“भिम रावलको, वि’चल्ली,नत माधवको, न त ओलीले, ठेगान, भएन आफ्नै बोलीको”
“एकीकृत समाजवादी,ले, फिर्ता लियो सरकार,लाइ दिएको समर्थन”
“नेपालीको र’ग’त उम्लिने, गरी अमेरिकाले,पठायो प्रश्नको उत्तर, आन्दोलनको, आधिबेहरी आउने पक्का”
“लोसपा एमसीसी,को पक्षमा” एमसिसि पारित गर्न आफूहरु लाई समस्या छैन।:-लोसापा”
“सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रचण्ड लाई ३४ हजार वर्ष जेल हाल्नु पर्ने होः-महेश बस्नेत”
“संसदीय पद्धतिको, धज्जी उडाउने सभामुखलाई,पदमा बस्न, दिनु हुँदैन : सांसद गंगा चौधरी”
( 2021, September 14th, Tuesday)